Wasaaradda amniga Puntland oo sheegtay in xal laga gaaray xurgufo colaadeed oo ka jiray Puntland ah, kana digtay khatarta Al-shabaab. – Radio Daljir
Wasaaradda amniga Puntland oo sheegtay in xal laga gaaray xurgufo colaadeed oo ka jiray Puntland ah, kana digtay khatarta Al-shabaab.
Galkacyo, Oct 24 ? Wasaaradda amniga dawladda Puntland ayaa sheegtay in xal-buuxa laga wada-gaaray dhammaan xurgufo iyo xiisado colaadeed muddo ka aloosnaa deegaanno badan oo ka mid ah Puntland iyo waliba kuwa dhawaan curtay.
Wasiirka amniga Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan oo maanta waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in ay xal u heleen, lana xakameeyey dhammaan dhacdooyinkii colaadeed ee ka dhacay Galkacyo, Qardho, Rako iyo Ufayn oo gobolka Bari ka mid ah, kuwaasi oo badankoodu ahaa xurfo si lama filaan ah ku curtay.
Md. Khaliif Ciise Mudan, waxaa uu sheegay dawladda oo kaashanaysa indheergadka iyo bulshooyinka Puntland in ay juhdi badan ku bixisay sidii loo xakamayn lahaa xiisadaha colaadeed ee iskugu jiray kuwo horay u soo jiitamayey iyo kuwa dhawaan bilawday, waxaana uu tilmaamay dhammaan in is-faham buuxa laga gaaray isku-dhacyadii beeleed ee Puntland.
Dhinaca kale wasiirka amnigu, waxaa uu ka hadlay ammaanka guud ee Puntland iyo suurtagalnimada Al-shabaab in ay u soo baxsadaan gobollada Puntland, maadaama dagaallo xooggan oo cirka iyo dhulka ah uga socdaan gobolladii iyo goobihii ay haysteen.
Wasiirku, waxaa uu sheegay dawladda Puntland in ay ku guulaystay gacan-ku-dhigidda dambiilayaal badan oo falal qorshaysan ka gaystay deegaannada Puntland, kuwaasi oo qaarkood la horgeeyey maxkamadda, caddaaladdana la marsiiyey, waxaana sidoo kale uu sheegay kuwa badan in ay maxkamad sugayaal yihiin.
Sikastaba ka ahaatee hadalka wasiirka amniga Puntland ee ku aaddan hal-u-helidda xurgufo-colaadeed Puntland ka dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli dhawrkii todobaad ee ugu dambeeyey meelo kala duwan oo ka mid ah gobollada Bari iyo Karkaar ay ka dhaceen isku-dhacyo hubaysan oo u dhaxeeyey beelo gobolka ah.